Tag: okwu | Martech Zone
Ihe atụ kachasị atụ anyị na-eji mgbe anyị na-ere ọrụ anyị, na-akọwa usoro anyị, na ịdebe atụmanya na atụmanya anyị na-atụle itinye ego. Ugboro ugboro, anyị na-anụ site na ndị ahịa na-ekwupụta: Anyị gbalịrị [fanye atụmatụ azụmaahịa] ọ rụghị ọrụ. Ogologo oge ole ka ị gbalịrị ya? Kedu ka imere nke ọma? Kedu ụdị ego ị mere? Ka anyị tụlee ezumike nká gị… ma ọ bụrụ na ị gbalịrị ya maka otu ọnwa, ezuteghị onye na-ahụ maka ego,
Enweela ụfọdụ okwu na blọọgụ gbasara nha nke WordPress post. Fọdụ enwula na Nchọgharị Nchọgharị ga-atụle mmetụta nke nọmba mbụ x, ebe x amaghị ugbu a. N'ihi ya, ihe ọ bụla nke ọ bụla gasịrị bụ naanị okwu efu. Foto si na Okwu! M kama garrulous na m blog posts otú m ga-eme ụfọdụ ndị ọzọ analysis na-ahụ ma ọ bụrụ na ndị ewu ewu nke